* Okirikiri ala biarin
QYBZ bụ onye nrụpụta azụmaahịa mba ofesi nwere kpamkpam.
Oge ezipụ: Sep-28-2021
QYBZ bụ onye nrụpụta azụmaahịa mba ofesi nwere kpamkpam. M na -emepụta biarin ọkachamara na ọnụ ala dị ala na ogo dị elu. Usoro bụ isi nke imepụta ihe (Lekwasị anya na isi usoro nrụpụta ferrule, ihe ahụ bụ chromium nwere carbon dị elu Gcr15SiMn) 1. Bas ...GỤKWUO »
Usoro nke nhazi nhazi bụ dị ka ndị a
1. Nhazi ibe ya bụ ịcha akwa bụ nhazi bụ isi nke nhazi mgbanaka mgbanaka, nke a makwaara dị ka nhazi oghere. Ebumnuche bụ isi nke ịkpụ ọkpọ bụ: (a) Enwetara oghere dị ka ụdị ngwaahịa a, iji meziwanye ọnụego ojiji nke igwe mater ...GỤKWUO »
Qianyong Bearing manufacturer Onye nrụpụta ọkachamara ọkachamara, biko kpọtụrụ Whatsapp: +8616536352555
Oge ezipụ: Jul-26-2021
Ihe eji ebu ihe: wiilị ụgbọ ala n'ihu, nnyefe, wiil azụ, ogwe pinion dị iche. Igwe eji arụ ụlọ, igwe ihe eji arụ igwe, nnukwu igwe ọrụ ugbo, gia ụgbọ ala na -ebelata ...
Oge ezipụ: Jun-02-2021
Abụ m onye nrụpụta sitere na China.
Oge ezipụ: Mee-17-2021
Abụ m onye nrụpụta sitere na China. Ọ bụrụ na ịchọrọ SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB Na ụdị ndị ọzọ ama ama Ị nwere ike kpọtụrụ m Welcome dị iche iche nke agba ...GỤKWUO »
Abụ m onye nrụpụta sitere na China. Ọ bụrụ na ịchọrọ SKF / FAG / INA / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FYH / NMB / THK / IKO / ASAHI / HIWIN / DODGE / STIEBER / TSUBAKI / SNR / KBC / URB
Oge ezipụ: Mar-24-2021
Okwu Mmalite nke Ịmụ
Oge nzipu: Dec-18-2020
Okwu Mmalite nke iburu bọl gbamgbam miri emi: a na -akpọbu ya dị ka otu ahịrị radial bọl, ọ bụ nke a na -ejikarị ebugharị ebugharị. Njirimara ya bụ nguzogide esemokwu dị ala yana oke ọsọ. Mgbe a na -eme atụmatụ ...GỤKWUO »
Gịnị bụ omimi uzo bọl agba?
Gịnị bụ omimi uzo bọl agba? Ọ bụghị ihe niile na -agba bọọlụ bụ otu. Emebere ụdị aghụghọ dị iche iche iji mezuo ihe ụfọdụ achọrọ, yabụ ọ bụrụ na ị bụghị injinia ma ọ bụ onye na -ebubata ihe (ọbụlagodi na ị na -eme mgbe ụfọdụ), ọ bụghị mgbe niile ...GỤKWUO »
na -elekọta mmadụ
Okwu: A-1403-8, ngọngọ ọlaọcha, West Minghu Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province